Yameen Rasheed, Bilaogera Sady Mpikatroka tao Maldives, Maty Voatsindrona Antsy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2017 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Português, Ελληνικά, Swahili, Español, English
Pikantsary avy amin'ny Youtube / tafa nifanaovana tamin'i Yameen Rasheed nataon'ilay Nepaley mpanao gazety sady bilaogera Ujjwal Acharya.
Maty voatsatoka antsy tao Male renivohitry ny fireneny ilay bilaogera Maldiviana sady mpikatroka, Yameen Rasheed (29 taona) ny Alahady 23 Aprily 2017 vao maraina be.
Tamin'ny alàlan'ny bilaoginy The Daily Panic sy ny kaontiny Twitter @Yaamyn, lasa mpitsikera amin'ny fo mafàna ny governemanta sy ireo Islamisma radikaly i Rasheed. Tohina noho ny fahafatesany, naneho ny hatezerany sy ny ahiahiny ireo Maldiviana tao amin'ny media sosialy, raha ny sasany kosa nitaky ny hisian'ny fanadihadiana iraisampirenena.
Tamin'ny 3 ora maraina i Rasheed no hita tao an-tohatry ny efitranony, feno tsatokantsy marobe ary maty raha vantany vao tonga teny amin'ny hopitaly. Tsatoka 16 no hita tamin'ny vatany, 14 teo amin'ny tratra, iray teo amin'ny tenda, iray teo amin'ny loha. Marobe ny fandrahonana ho faty voarainy tamin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra sy ny media sosialy noho ny fomba fijeriny mifanohitra amin'ny an'ny governemanta sy ireo mpino mahery fihetsika. Nanao tatitra ho an'ny polisy momba ireny fandrahonana ireny izy.
Ny 1 May 2015 dia nosamborina izy fa nandray anjara taminà hetsika iray manohitra ny governemanta ary notazonina nandritry ny 21 andro.
Asa matianina amin'ny resaka IT no nosahanin'i Rasheed ho an'ny Tsenam-panakalozana Vola tao Maldives. Ho fanomezana voninahitra an'i Rasheed, nikatona ireo biraon'ny Fanakalozana Vola tamin'ny Alahady 23 Aprily 2017.
Nandefa bitsika ny mpitondra tenin'ny filoha Abdulla Yameen hoe “hitady izay meloka” ny governemanta. Nangatahana ihany koa ny vahoaka hanome vaovao hahafahana manampy amin'ny famahàna ilay olana.
Nandefa hafatra fiarahamiory amin'ny fianakvian'i Yameen Rasheed ny Filoha Yameen
Ny filoha Maldiviana teo aloha, Maumoon Abdul Gayoom, nibitsika ny fihetsehampo nananan'ireo mpisera marobe:
Tena tohina mafy tokoa tamin'ny famonoana an'ilay mpikatroka mafana fon'ny media sosialy, Yameen Rasheed. Allah anie hitahy ny fanahiny! Tsy maintsy entina eny anatrehan'ny fitsaràna ireo namono azy.
Filoha taloha iray hafa koa, Mohamed Nasheed, no nangataka hanaovana fanadihadiana misokatra:
Feo iray sahy, nampanginina tampoka. Tsy misy afa-tsy fanadihadiana iray tsy miankina & misokatra iarahana amin'ny iraisampirenena no ahafahana mahita ny rariny ho an'i @yaamyn
Nisaona ny fahafatesany ihany koa ireo naman'i Rasheed ao amin'ny fiarahamonina sivily:
HRD (Mpiaro Zon'Olombelona) feno fahasahiana tokoa i Yameen Rasheed no sady bilaogera mahay mandaha-teny. Tsy avelan'ny vondrom-piarahamonin'ireo mpiaro zon'olombelona fotsiny amin'izao ny famonoana feno habibiana nanjo azy. Mandria am-piadanana.
Andro iray manjombona! Very namana iray tena lalaina & rahalahy izahay @yaamyn
Tsy hanadino anao velively izahay
Allah anie hanome anao ny Janatul Firdous …amena
Maldiviana iray mpila ravinahitra namany, Muju Nasim. manoratra momba ilay andianà lahatsary ety anaty tranonkala manasongadina ny asa nataon'i Rasheed:
Ho an'ireo rehetra te-hahafantatra misimisy kokoa momba an'i Yameen Rasheed sy ny toetra maha-olona azy, azonareo jerena ilay andianà lahatsary ety anaty tranonkala (Ity herinandro ity teto Maldives) niarahanay nanatontosa.
Vao fizaràna vitsy monja no vitanay ny fandraketana azy, fony izahay noterena hampiato ny famokarana azy io noho ny fahatahoranay ny amin'ny ainy satria aho aty ampitan-dranomasina no monina efa nandritry ny dimy taona lasa.
Manana tantara manahirana momba ny famonoana tsy mandalo fitsaràna ny ao Maldives, mikendry ireo mpanao gazety, mpikatroka mafàna fo ary bilaogera.
Bilaogera, mpikatroka LGBT no sady mpanao gazety i Ismail Khilath Rasheed, fantatra ihany koa amin'ny hoe Hilath, novonoin'ireo Islamista radikaly tamin'ny tsatoka antsy tamin'ny Jona 2012.
Somary nitovy tamin'ny namonoana an'i Rasheed, ny Oktobra 2012 i Dr Afrasheem Ali, solombavambahoaka avy amin'ny antoko liam-pivoarana ao Maldives (PPM), no maty voatsatoka antsy tamin'ny fomba feno habibiana teo ivelan'ny trano fonenany.
Rasheed dia namana akaikin'i Ahmed Rilwan Abdulla, Maldiviana iray hafa mpanao gazety fantadaza, bialogera ary mpiaro zon'olombelona, izay nisy naka an-keriny sy nanjavona tamin'ny 2014 (jereo tatitry ny Global Voices). Hatramin'ny 2014, niasa fatratra i Rasheed hivoahan'ny rariny momba an'i Rilwan, ary tsy ela akory izay dia niasa niaraka tamin'i fianakavian'i Rilwan nameno antontan-taratasim-pitoriana ny polisin'i Maldives, mifandray amin'ny fanadihadiana ny nahafatesan'i Rilwan.
Heverin'ilay bilaogera, Amira, fa tsy tranga maningana akory ny namonoana an'i Rasheed :
Tsy afaka ny ho tranga maningana vokatry ny nataon'ny adala mivenjivenjy eny rehetra eny mamono olona io. Tena mahatsapa aho hoe zavatra efa voaomana tsara sy notanterahana io.
Raha nanoratra tao amin'ny Facebook, Mickail Naseem dia manakiana ny polisy noho ny tsy nihetsehany momba ireo fandrahonana ho faty natao an'i Rasheed:
Tsy afaka hatoky aho hoe hanao fanadihadiana tsy mitanila momba ny fahafatesany ireo olona ao amin'ny sampandraharahan'ny polisy eto Maldives izay ninia nanampina ny masony tamin'ireo fandrahonana ho faty natao an'i Yameen Rasheed.
Raha nanoratra ihany koa tao amin'ny Facebook, Naafiz Abdulla dia miahiahy momba ireo famonoana mikendry ny olompirenena tsotra :
Tsy manana fiantohana ny ain'ny olona ho an'ireo olompireneny “Ilay lazaina” ho paradisa an-tany. Rahampitso, mety ho izaho, ianao, na ny iray amintsika.
Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo fanehoankevitra tao amin'ny Twitter momba ny fahafatesan'i Rasheed:
Ireo nandrasarasa an'i Afrasheem, naka an-keriny an'i Afrasheem, namono an'i Yameen, mahafantatra fa ny andrana ataonareo hampanginana anay, hampitahotra anay dia vao mainka hampisy maromaro kokoa aminay
Novonoinareo i Rilwan ary dia niverina naka anarana Yameen izy, ankehitriny novonoinareo izy dia hisy olona hafa indray ho tonga hanambara. Tsy misy afaka hamono ny marina
Rilwans sy Yameen firy no tsy maintsy ho faty ho anareo alohan'ny hanombohanareo hiady hanànana fiainana mendrika?